မင်းသားကြီး ကျော်ရဲအောင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးဝတီစံ – အနုပညာရပ်ဝန်း
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်ရဲအောင်ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများနဲ့ ရုပ်ရှင်များကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ မင်းသားကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ကျော်ရဲအောင်က အိမ်ထောင်ရေး ဖော်ပြန်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ၊။
အဆိုပါ ကောလဟာလကိုတော့ ဟန်ငြိမ်းဦးဆိုတဲ့ ပေ့ချ်ကနေပြီး မျှဝေဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဟန်ငြိမ်းဦးဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်ကတော့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ နောက်ကြောင်းနဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေကို မျှဝေနေတာ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ထိုသတင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ကာယကံရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးဝတီစံက အခုလိုပဲ ဖြေရှင်းလာပါတယ်။
ပိုးဝတီစံက သူမအကြောင်းရေးထားတဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦးရဲ့ပို့စ်ကို Share ပြီး ” ရီလိုက်ရတာ သေတော့မယ် ???အောက်မှာ link ချပေးထားတယ်။ Sky netကလည်း လွှင့်တယ်နော် အားပေးကြပါဦးရှင် ?? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ဟန်ငြိမ်ဦးတင်ထားတဲ့ ကျော်ရဲအောင်နဲ့ သူမရဲ့ပုံက ” ကပ်သီးကပ်သပ်” ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေနဲ့တကွ ချပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပင်နီဝတ်တွေ အလေးပြုခဲ့ရတာက ဟိုတယ်နံရံကြီးပါလို့ အစချီကာ ထပ်မံဖြေရှင်းလာတဲ့ သားညီ